Madaxda Jubilee oo sheegay inaan loo baahnayn isbedel lagu sameeyo dastuurka – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxda Jubilee oo sheegay inaan loo baahnayn isbedel lagu sameeyo dastuurka
Star FM September 28, 2018
Mas’uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka dalka Mr. Willaim Ruto ayaa sheegay in xiligan la joogo waqtigii loo adeegi lahaa dadweynaha oo aanan loo baahnayn in lagu mashquulo arrimo siyaasadeed.
Mr. Ruto ayaa madaxda siyaasadeed ugu baaqay inay xoogga saaran sidii ay isaga kaashan lahayeen u adeegidda shacabka soo doortay ee ku aaminay xilalka hoggaanka ee ay hayaan.
Hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ahna mudanaha laga soo doortay degaanka Garissa Township ee ismaamulka Garissa Aadan Barre Ducaale ayaa isna sheegay in kulankii 9-kii bishii saddexaad ee sannadkan dhex maray madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Nasa Raila Odinga uusan ka dhignayn isbedel lagu sameynayo dastuurka wadanka u degsan.
Waxaa uu sido kale sheegay in guddiga ka kooban 14-ka xubnood ee ka shaqeynaya ka dhabeynta waxyaabihii lagu heshiiyay uusan eegeynin dastuur la bedelo.
Mr. Ducaale ayaa sheegay in ka jubilee ahaan aysan tageersanayn siyaasad la doonayo in lagu bedelo qaanuunka la isticmaalo.
Hasa ahaate barasaabka ismaamulka Tana River ee gobolka xeebta Dhado Godana ayaa qeexay inay lagama maarmaan tahay in madaxda ay kulmaan oo mar waliba xal loo raadiyo arrimaha lagu kala aragti duwanyahay
Madaxdan ayaa hadaladan jeediyay xili shalay ay ku sugnayeen magaalada Hola ee maamul goboleedka Tana River.
← Midowga Yurub oo 100 milyan oo Yuuro ugu deeqay soomaaliya
Madaxweynaha Jubbaland oo Dalbaday Xoojinta Dagaalka Ka Dhanka Ah Al-Shabaab →